Umhla My Pet » Indlela yokwenza Vula Ulwalamano Work
ngokuthi li yen
Indlela yokwenza Vula Ulwalamano Work
ukubuyekezwa: Jan. 27 2021 | 3 min ukufunda
Kukho umgca ukusuka ingoma Brooke Fraser ohamba "uthando lokwenene uthando nzima". Le ayinakuba babekulangazelela. Ngokungafaniyo kwi Mills & Boons iinoveli uthando okanye eshukumayo Disney, ubudlelwane azisoloko uzakuphela ne izibini ekhwele off kwi kwelanga. Leliphi eliza emva ko izibhengezo uthando umgudu nokuzinikela. Abantu badla sizama zokulunga kodwa enokufikelela endala ngokukhawuleza. Life nzima ngokwaneleyo ngaphandle ukujongana yonke loo mdlalo semvelo. Kwelinye icala isikali, kukho abantu ubudlelwane abo zivulelekile ukuthandana okanye ukubona abanye abantu. Ngoxa igama elithi "ubudlelwane evulekileyo" sele ebezisloko ixesha elide ngoku, inkcazelo ecacileyo yintoni ebangwa olu hlobo lolwalamano ihlala angaziwa kubantu abaninzi.
Yintoni kanye kanye Ulwalamano Open?
Abanye bathi ukuba kulwalamano evulekileyo unika abantu inkululeko kunye bhetyebhetye ukuthi zibekwe ngaphandle ubunzima ngakumbi wokulindelwe nokuzibophelela neqabane. Abanye opine ukuba yinto nje ngendlela engayiwayo yokuvumela namaqabane ngokukrexeza omnye komnye. Nokuba le mbono, kukho iimpawu ezicacileyo ukubonisa ukuba yolwalamano ukusebenza xa ilawulwa kwaye ziphethwe kakuhle. Njengoko kunye nezinye ubudlelwane, konke oko kuxhomekeke kuthethwa ngumntu ngamnye ufuna. ngokucacileyo, abantu kwezi ntlobo kolwalamano basengozini bajonge iintlobo ezahlukeneyo ebuhlungu. Ngokungafaniyo amahlakani kulwalamano kwenkosikazi, abo yolwalamano bangenalo ukhetho komzobo "yena umqhathile kum /" ikhadi. Ngoko Umntu uye njani ukuqinisekisa ukuba ubudlelwane kubalulekile ube yimpumelelo kwaye ihleli?
Injongo Common nokuzinikela
Kungaqaliswa, kufuneka kubekho umtsalane - emzimbeni nasengqondweni - phakathi omabini amaqela. Emveni kwakho konke, ukuba wayeza kuba sisizathu esingundoqo sokuba kutheni bobabini ndawonye kwindawo yokuqala. Nje ngenxa yokuba eshiya ngokwabo ukuvula ekukhangeleni kunye namanye amaqela anomdla kufuneka emzileni kwinto yokuba abantu ababini baye bagqiba ukuba bazibophelele omnye komnye ngendlela yabo. Ukusebenza kulo ndanditsaleleka, isigqibo ngenxa ulwalamano evulekileyo ukuze ngokulula ukuba bobabini kusekho zazikulangazelela ngokuxilonga ezinye iinketho. ngoko ke, ukuba akwazi ukulawula ulwalamano evulekileyo ngumbandela yokuqinisekisa ukuba omabini amaqela ukuqonda "imithetho" somdlalo. Kakhulu ezifana ulwalamano eqhelekileyo womntu, abo yolwalamano kuba imilinganiselo zabo kwakunye. Iresiphi ukuba ulwalamano yimpumelelo evulekileyo ukuba omabini amaqela ukuqonda kunye nokuzibophelela imithetho efanayo.
Ukunyaniseka Goes A Long Way
Njengoko nayo yonke into ebomini, ukunyaniseka yinxalenye enkulu ngolwalamano evulekileyo. Emveni kwakho konke, isiseko ulwalamano evulekileyo kukuba kukho intembelo obuphilileyo phakathi kwamaqabane. Indlela kuphela ukuba bangasebenza na ukuba zombini zisoloko anyanisekile kwabanye. Kwakhona ngokulawula nolindelo. Ukuba kubudlelwane evulekileyo ifana kakhulu nezinye iintlobo ubudlelwane ukuba ubona yonk '. Logama nje evunyiweyo ngento yenza eenguqu ulwalamano lwabo bobabini yaye bayakwazi ukusebenza ngokuqhubekekayo kule njongo, akukho sizathu sokuba ulwalamano evulekileyo aziyi kuhlala ngobanjiso elide. Enye yezinto ezibalulekileyo ulwalamano yimpumelelo evulekileyo le nje: yintoni umntu ngamnye ukuba baphume kuwo? Ukuba oku sayamene, ulwalamano evulekileyo icwangcisiwe ukuya.
Kanjalo, ulwalamano evulekileyo Asingabo bonke. Kanye njengezinye iintlobo ubudlelwane, oko ziphelela ntlungu. nokuba, oko kuba sisixhobo ulwalamano luncedo kakhulu ingakumbi kubantu abakuthandayo ukuba kunye neqabane nakubeni ithuba lokudibana nabanye ngexesha elinye. Abaninzi ukuze opine ukuba yolwalamano ndiye kanye sisiseko ntsingiselo ukuzibophelela kunye nothando. nokuba, kukho iimeko apho amaqabane kubudlelwane livulekile musa ngokuthandana okanye ukudibana nabanye abantu. Abo ukufumana impumelelo yolwalamano ngokufuthi bafumanisa ukuba unikwa inkululeko umhla abanye okunene ubatsalela kufutshane namaqabane awo. Inyaniso engundoqo kulwalamano nyani ileyibhile ukuba asondeze kuwo kodwa amandla iqela ngalinye ukwenza izigqibo ezisekelwe ekuqondeni Mutual.
Indlela Fumana kwi axa Love?
Yintoni Ngaba Abafazi olufunayo UbuDlelwane?